PC Knowledge Episode 6: Graphic Card များအကြောင်း (Part 1) • TECH CORNER
PC Knowledge Episode 6: Graphic Card များအကြောင်း (Part 1)
ကျနော်တို့ Page ကနေအကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ရပ်နားသွားတဲ့ Computer Parts တွေအကြောင်းကို ဆက်လက်ဖော်ပြပေးသွားပါမယ်။ ဒီတစ်ခေါက်ဖော်ပြပေးမှာကတော့ PC Parts တွေရဲ့ဇာတ်လိုက်ကျော်ကြီး Graphic Card တွေအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။
GPU ရဲ့အရှည်ကတော့ Graphic Processing Unit ဖြစ်ပြီးတော့ သူရဲ့အဓိကတာဝန်ကတော့ Computer ရဲ့ရုပ်ထွက်ပိုင်းနဲ့သက်ဆိုင်တာတွေကို တွက်ချက်ဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ အတော်များများ အမှတ်မှားနေကြသလို GPU တွေဟာ ဂိမ်းဆော့မှသာ လိုအပ်တာမျိုးမဟုတ်ပါဘူး GPU တွေကို အသုံးပြုတဲ့နေရာတွေ အများကြီးရှိပါသေးတယ်။
Graphic Processing Unit လို့ဆိုရာမှာ အဓိကအနေနဲ့ Integrated Graphic Unit နဲ့ Dedicated Graphic Unit ဆိုပြီးနှစ်မျိုးရှိပါတယ်။ Integrated Graphic Unit ကိုတစ်နည်းအားဖြင့် iGPU လို့လဲခေါ်ကြပြီး CPU ထဲမှာတစ်ပါတည်းပါဝင်လာတဲ့ GPU တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။
CPU ထုတ်လုပ်တဲ့ Company ကြီးတွေဖြစ်တဲ့ Intel နဲ့ AMD တို့ဟာ သူတို့ရဲ့ CPU တွေမှာ integrated graphic တွေကို တစ်ပါတည်း ထည့်ပေးတတ် ကြပါတယ်။ ဥပမာ intel ဘက်မှာဆိုရင် F မဟုတ်တဲ့ Model နံပါတ်နဲ့ CPU တွေဟာ iGPU ပါဝင်ကြပြီးတော့ AMD ဘက်မှာတော့ Model နံပါတ်မှာ G ပါဝင်တဲ့ CPU တွေဟာ iGPU ပါဝင်ကြပါတယ်။ iGPU တွေရဲ့ အားသာချက်ကတော့ ပါဝါစားသက်သာတဲ့အတွက် အပူထွက်ရှိမှုနည်းပြီးတော့ သီးသန့်ပါဝါပေးစရာမလိုအပ်ပါဘူး။ ပါဝါစားသက်သာသလို Performance လဲအရမ်းမကောင်းပဲ သာမန်ရုံးသုံးအလုပ်တွေကိုသာ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ Dedicated Graphic Unit ဆိုတာတွေကတော့ ဈေးကွက်ထဲမှာမြင်နေကျတဲ့ Graphic Card လို့ကျနော်တို့ခေါ်ခေါ်နေတဲ့ ကဒ်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ကတော့ ပါဝါလဲပိုစားသလို Performance ကလဲ ကိုယ်ရွေးချယ်လိုက်တဲ့မော်ဒယ်အလိုက် အကောင်းဆုံး Graphic Performance ကိုရရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။
အပေါ်ဘက်မှာ ကျနော်ပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲ GPU တွေကို Gamer တွေမှလိုအပ်တာမဟုတ်ပါဘူး။ Computer တိုင်းမှာ အနည်းဆုံး GPU တစ်ခုစီတော့ ပါဝင်ကြပါတယ်။ သာမန်ရုံးသုံး Computer တွေမှာတောင် iGPU တော့ပါဝင်ကြပါတယ်။ GPU သာမပါရင် Monitor ပေါ်မှာ ဘာမှပေါ်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ ခုခေတ် iGPU တွေဟာ သီးသန့်ထပ်စိုက်သုံးတဲ့ Graphic Card တွေလောက်တော့ Performance မရပေမဲ့လဲ သုံးစားမရတာမျိုးတော့ မဟုတ်တော့ပါဘူး။ AMD CPU တွေမှာပါဝင်လာတဲ့ iGPU ဖြစ်တဲ့ Vega Graphic ဆိုရင် တချို့သော Game တွေကို Medium Settings လောက်ထိနိုင်နင်းအောင် စွမ်းဆောင်နိုင်ပါတယ်။ သီးသန့်ထပ်စိုက်ပြီးသုံးကြတဲ့ Graphic Card တွေကို သုံးတဲ့နယ်ပယ်တွေကတော့ ကျယ်ပြန့်ပါတယ်။ အကုန်လုံးသိထားကြသလိုပဲ Gaming မှာအဓိကအသုံးပြုကြသလို Engineering Software တွေဖြစ်တဲ့ AutoCAD, SolidWorks, Vray စတာတွေမှာ Rendering ချဖို့ Video Editing Software တွေမှာ Rendering ချဖို့ စသဖြင့် အသုံးပြုကြပါတယ်။ ခုချိန်မှာအသုံးချနယ်ပယ်အသစ်အနေနဲ့ Crypto Currency Mining မှာပါ Graphic Card တွေကိုအသုံးပြုနေကြပါတယ်။ Graphic Card တွေမဖွံဖြိုးခင်ကတော့ CPU တွေနဲ့ Rendering လုပ်ခဲ့ကြပြီးတော့ အချိန်များစွာ ကုန်ခဲ့ပါတယ်။ Graphic Card တွေဖွံဖြိုးပြီးနောက်မှာတော့ GPU Rendering ဟာ CPU Rendering ထက်အချိန်များစွာသက်သာတဲ့အတွက် GPU Rendering သာအသုံးများလာပါတယ်။
Graphic Card ထုတ်လုပ်သူများ
ကျနော်တို့ Graphic card တွေဝယ်ဖို့စဉ်းစားလိုက်တဲ့အခါမှာ Nvidia တို့ AMD တို့ရှိသလို MSI တို့ Gigabyte တို့ ASUS အစရှိသဖြင့် နာမည်တွေအများကြီး ကြားဖူးကြမှာပါ။ နားမလည်တဲ့သူအမြင်မှာတော့ ရှုပ်ကောင်းရှုပ်နိုင်ပေမဲ့ နားလည်လွယ်အောင် အလွယ်ရှင်းပြရရင်တော့ ဒီ Company တွေမှာ Graphic Chip ထုတ်တဲ့ Company နဲ့ တပ်ဆင်တဲ့ Company ဆိုပြီးနှစ်မျိုးရှိပါတယ်။ Graphic Chip ထုတ်တဲ့ Company အနေနဲ့အဓိကအားဖြင့် Nvidia နဲ့ AMD ဆိုတဲ့ Company ကြီးနှစ်ခုရှိပါတယ်။ ဒီ Company ကြီးတွေဟာ Founder Edition Graphic Card တချို့ရောင်းတာကလွဲရင် Grahpic Card ရယ်လို့ ထုတ်မရောင်းကြပဲ Graphic Chip သီးသန့်သာထုတ်ရောင်းကြပါတယ်။ Intel အနေနဲ့ကလဲ ကိုယ်ပိုင် Dedicated Graphic Chip ထုတ်လုပ်ဖို့ကြိုးစားနေပြီး နောက်နှစ်တွေမှာ Graphic Chip လောကထဲကိုဝင်ရောက်လာဖို့ရှိပါတယ်။ နောက်ထပ်ကျန်တဲ့ Company တစ်မျိုးကတော့ Graphic Card ထုတ်လုပ်တဲ့ Company တွေဖြစ်ပြီးတော့ MSI, Gigabyte, Asus နဲ့ China Company တချို့ပါဝင်ကြပါတယ်။ ဒီ Company တွေဟာ Nvidia တို့ AMD တို့ဆီက Graphic Chip ကိုဝယ်ယူပြီး Reference Design တွေကိုအခြေခံကာ ကိုယ်ပိုင် PCB မှာ Chip တပ်ဆင်တာတွေ Cooling Solution တပ်ဆင်တာတွေပြုလုပ်ပြီး ‌ဈေးကွက်ထဲကို Graphic Card Model မျိုးစုံကို ထုတ်လုပ်ရောင်းချကြပါတယ်။
Desktop Nvidia Graphic Chips
Nvidia ဟာ လက်ရှိမှာ Graphic Card လောကရဲ့ နာမည်အရဆုံး Company ပဲဖြစ်ပါတယ်။ Nvidia ကဒ်တွေမှာ အရင်ကတော့ GT နဲ့ GTX ဆိုပြီးနှစ်မျိုးရှိခဲ့ပါတယ်။ GT ကပုံမှန်ရုံးသုံး Graphic Card တွေဖြစ်ပြီးတော့ GTX ကတော့ ပိုပြီးကောင်းတဲ့ High End ပိုဖြစ်တဲ့ Gaming Graphic Card တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ Nvidia ဟာ May 17 2017 မှာနောက်ဆုံး GT Card အနေနဲ့ GT 1030 ကိုထုတ်လုပ်ခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့ GT Card တွေထပ်မံထွက်ရှိလာခြင်း မရှိတော့ပါဘူး။ လက်ရှိမှာ Nvidia အနေနဲ့ Gaming ကဒ်တွေအဖြစ် GTX နဲ့ RTX ဆိုပြီး နှစ်မျိုးထုတ်လုပ်ထားပါတယ်။ Nvidia ဟာသူ့ရဲ့ Graphic Card Model တွေကို ဘယ်လိုနာမည်ပေးထားလဲ ကျနော်တို့ဘယ်လိုနားလည်ရမလဲဆိုတာ ကြည့်ရအောင်။
ကဒ်တွေရဲ့ နာမည်ထိပ်တွေမှာတွေ့ရှိရတဲ့ GT တို့ GTX တို့ RTX တို့ဟာ Prefix တွေဖြစ်ပြီးတော့ ဒီ Graphic Card ကိုဘယ်လိုနေရာတွေအတွက်ရည်ရွယ်ထုတ်လုပ်ထားလဲဆိုတာကို ဖော်ပြပါတယ်။
GT အနေနဲ့ သာမန်အိမ်သုံးရုံးသုံး
GTX အနေနဲ့ Gaming
RTX အနေနဲ့ Ray Tracing Gaming
Prefix တွေဖြစ်တဲ့ GTX တို့ RTX တို့နောက်မှာပါတဲ့ Digit တွေကတော့ Generation ကိုရည်ညွှန်းပါတယ်။ 100 series လောက်ကနေစပြီးထုတ်လုပ်ခဲ့တဲ့ Generation ပေါင်းများစွာရှိခဲ့ပေမဲ့ လက်ရှိဈေးကွက်ထဲမှာအမြင်များတဲ့ Generation တွေကတော့
600 Series (eg. GT 610)
700 Series (eg. GTX 750Ti)
900 Series (eg. GTX 980)
1000 Series (eg. GTX 1060)
1600 Series (eg. GTX 1650Super)
2000 Series (eg. RTX 2080)
3000 Series (eg. RTX 3060Ti)
Series တွေရဲ့နောက်မှာပါတဲ့ Digit နှစ်လုံးကတော့ ကဒ်ရဲ့ Performance ကိုဖော်ပြပါတယ်။ Generation တူကဒ်နှစ်ခုမှာ နံပါတ်ပိုကြီးတဲ့ကဒ်က ပိုကောင်းတဲ့ Performance ကိုဆိုလိုပါတယ်။
Performance Level တွေအနေနဲ့
30 = Low End (eg. GT1030)
50 = Lower Mid-Range (eg. GTX 1650)
60 = Upper Mid-range (eg. GTX 1660)
70 = Flagship (eg. RTX 2070)
80, 90 = High End (eg. RTX 3090)
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျန်တာကတော့ Graphic Card Model တွေရဲ့နောက်ဆုံးမှာပါတတ်တဲ့ Ti တို့ Super တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ တချို့ကဒီနေရာမှာ အနည်းငယ်ဒွိဟဖြစ်သွားကြပါတယ်။ ဒါပေမဲ့မခက်ပါဘူး။ သူတို့ရဲ့ Performance level အရစီလိုက်မယ်ဆိုရင်
ရိုးရိုး Version < Super Version < Ti Version ဖြစ်ပါတယ်။
ဥပမာအနေနဲ့ပြောရရင် GTX 1660 < GTX 1660 Super < GTX 1660Ti ပါ။ ဒီအထိပြောသမျှကတော့ Desktop Nvidia Card တွေရဲ့ Model နံပါတ်ဖတ်နည်းအကုန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ နောက်အပိုင်းမှာကတော့ Nvidia Mobile Graphic Card တွေနဲ့ AMD Graphic Card တွေအကြောင်းကို ဆက်လက်ဖော်ပြပေးပါမယ်။
All photos are sincerely credited to original source.
AMDGPUNvidiaPC gamingPC Knowledge
Graphic Card တစ်ခုဝယ်တဲ့အခါ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ပြန်ဂျင်းထည့်မိတာမျိုး မဖြစ်အောင် …
Episode 6: Part3ကတော့ Graphic Card တွေဝယ်တဲ့အခါမှာ ကိုယ်ဝယ်ယူမယ့် GPU ရဲ့ Specs ကိုဘယ်လိုဖတ်ရမလဲဆိုတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ Graphic Card တွေရဲ့ Specs ကိုဖတ်တဲ့အခါမှာ အရေးအကြီးဆုံး အချက် (၁၂) ချက်ရှိပါတယ်။ အဲ့ဒါတွေကတော့
PC Knowledge Episode 6: Graphic Card များအကြောင်း (Part 2)
Post Views: 1,277 Facebook0Tweet0Email0Share0Shares0 Mobile Nvidia Graphic Chips ကျွန်တော်တို့ Episode 6: Part 1 မှာတုန်းက Graphic
PC Knowledge Episode 5: Computer Motherboard တွေ အကြောင်း Part 2
Post Views: 1,295 Facebook0Tweet0Email0Share0Shares0 အားလုံးပဲ မင်္ဂလာပါ တစ်နေ့က Motherboard တွေ အကြောင်း Ep5Part 1 အဖြစ်
PC Knowledge Episode 5: Computer Motherboard တွေ အကြောင်း Part 1
CPU တွေ အကြောင်းကို အပိုင်း ၄ ပိုင်းဖော်ပြခဲ့ပြီးနောက် Motherboard တွေအကြောင်းကို Episode5အဖြစ်နဲ့ ဆက်လက်ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
2 thoughts on “PC Knowledge Episode 6: Graphic Card များအကြောင်း (Part 1)”
Pingback: PC Knowledge Episode 6: Graphic Card များအကြောင်း (Part 2) • TECH CORNER
Pingback: Graphic Card တစ်ခုဝယ်တဲ့အခါ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ပြန်ဂျင်းထည့်မိတာမျိုး မဖြစ်အောင် ... • TECH CORNER